सुनको मूल्य आकासियो, आजको बजारभाउ कति? - ramechhapkhabar.com
सुनको मूल्य आकासियो, आजको बजारभाउ कति?
नेपाली बजारमा बुधबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार छापावाल सुन प्रतितोला ९२ हजार २०० रुपैयाँ कायम भएकोमा बुधबार ६०० रुपैयाँले बढेर ९२ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको हो।
त्यसैगरी, तेजाबी सुन प्रतितोला ९२ हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि बुधबार तोलामा १० रुपैयाँले बढेर एक हजार २६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ।
नेप्सेमा ५ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य समायोजन
अलग – अलग पाँच ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य बुधवार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा समायोजन भएको छ । नेप्सेले छ्याङ्दी हाइड्रोपावर, पोखरा फाइनान्स, मल्टिपर्पस फाइनान्स, कालिका लघुवित्त र जन उत्थान सामुदायिक लघुवित्तको शेयरमूल्य समायोजन गरेको हो ।
छ्याङदी हाइड्रोपावरले हकप्रद शेयर प्रयोजनका लागि र बाँकी चार कम्पनीहरुले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ बुधवार बुकक्लोज गरेसँगै नेप्सेले बुक क्लोजपछिको मूल्य तोकिदिएको हो ।
नेप्सेले जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको २५ प्रतिशत, कालिका लघुवित्तको १३ प्रतिशत, मल्टीपर्पस फाइनान्सको १३ प्रतिशत र पोखरा फाइनान्सको ८ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत बोनस शेयर र छ्याङदी हाइड्रोपावरको ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर प्रयोजनका लागि मंगलवार कायम अन्तिम शेयरमूल्यको आधारमा मूल्य समायोजन गरेको हो ।
समायोजनपछि नेप्सेले जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको शेयरमूल्य रू. २ हजार ३८३ दशमलव २०, कालिका लघुवित्तको रू. १ हजार १६३ दशमलव ७२, मल्टीपर्पस फाइनान्सको रू. ४१६ दशमलव ८१, पोखरा फाइनान्सको रू.४४० दशमलव ४३ र छ्याङ्दी हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य रू. ३९६ दशमलव १५ तोकेको छ ।
मंगलवार जन उत्थान सामुदायिक लघुवित्तको अन्तिम शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. २ हजार ९७९ , कालिका लघुवित्तको रू. १ हजार ३१५, मल्टीपर्पस फाइनन्सको रू.४७१ ,पोखरा फाइनान्सको रू. ४७६ र छ्याङ्दी हाइड्रोपावरको रू. ४८५ कायम भएको थियो ।
जन उत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पुस ३० गते साधारण सभा बोलाएको छ । सभाले गत आर्थिक वर्षको मुनफाबाट प्रस्तावित २५ प्रतिशत बोनस शेयरसँगै कर प्रयोजनका लागि १.३२ प्रतिशत नगद लाभांशसमेत पारित गर्नेछ ।
त्यस्तै कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १३ प्रतिशत बोनस शेयर वितरणको प्रस्ताव पुस ३० गते बाह्रौँ वार्षिक साधारण सभामार्फत पारित गर्दैछ ।
त्यसैगरी, पोखरा फाइनान्सले हाल कायम चुक्तापूँजीको ८ दशमलव ०७५ प्रतिशत बोनस शेयर र सोमा लाग्ने कर प्रयोजनार्थ ० दशमलव ४३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न पुस ३० गते, २५ औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ ।
त्यस्तै, मल्टीपर्पस फाइनान्सले १३ प्रतिशतका दरले बोनस शेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ शून्य दशमलव ५३ प्रतिशत नगद लाभांश पुस ३० गतेनै २४औं वार्षिक साधारण सभामार्फत पारित गर्दैछ ।
छ्याङदी हाइड्रोपावरले भने हालसम्म ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासनको मिति तय नगरेपनि बुक क्लोजको मिति भने तय गरेको हो । पुस २० गतेसम्म कायम शेयरधनीहरु मात्र छ्याङ्दीको ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर र अन्य चार कम्पनीहरुको लाभांश प्राप्त गर्न योग्य भएका छन् ।